လူမျိုးရေး သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု | iPhone သတင်း
Apple သည် လူမျိုးရေးသာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် Unity Lights Sphere အသစ်ကို လွှင့်တင်လိုက်သည်။
သောအရာတစျခု Apple Watch နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ အနှစ်သက်ဆုံးမှာ စက်လုံးများဖြစ်သည်။နေ့စဉ် နာရီအသစ်တစ်လုံး ဝတ်ဆင်နိုင်ခြေ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ Apple Watch ပတ်လည်ရှိ အရာအားလုံး။ နာရီအားလုံးအတွက် အသုံးများသော ဒိုင်ခွက်များ၊ မော်ဒယ်အသစ်များအတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပြီး Nike နှင့် Hermès မော်ဒယ်များအတွက် သီးသန့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံး ပြီးပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် Apple ၏ စက်လုံးပြခန်းကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ ဘယ်သောအခါမှ မဖွင့်ရသည့် အကြောင်းရင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့သည် ကြိုတင်သတိမထားမိဘဲ စက်လုံးများကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် Cupertino မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို အံ့အားသင့်စေသည်... ယခု၊ လူမျိုးရေး သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု အစပြုမှု၏ နယ်ပယ်အသစ်ဖြစ်သော Unity Lights အသစ်ကို စတင်လိုက်ပြီ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်ကိုဆက်ဖတ်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကပါ။ watchOS 7.3 သည် Unity နယ်ပယ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တူညီသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့် သာတူညီမျှမှုနှင့် လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အထိမ်းအမှတ်သိုင်းကြိုးနှင့်အတူ ပါလာသော စက်လုံးဖြစ်သည်။ ဒီနေ့၊ Apple သည် အထိမ်းအမှတ်သိုင်းကြိုးနှင့် ဒိုင်ခွက်ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အံ့အားသင့်စေပါသည်။အမှန်မှာ၊ ဤစက်လုံးအသစ်ကို စမ်းသုံးကြည့်ရန် Apple Watch အသုံးပြုသူများအားလုံးကို အသိပေးချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဂန္ထဝင်၏ဒီဇိုင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်ပြောင်းလဲစေသော "အင်နာလော့" ဒိုင်ခွက် ပန်-အမေရိကန်အလံ၏အရောင်များဖြင့် စက်လုံး၏နောက်ခံကိုပြသသည့် နီယွန်များအဖြစ် ၎င်းတို့ကို အပ်များပြုလုပ်သည့် စက်လုံး၊. စကားမစပ်၊ သင်၏ Apple Watch ၏ စက်လုံးများပြခန်းများမှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။.
Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop နှင့် Afrofuturism မှ မှုတ်သွင်းထားသော Unity Lights လက်ပတ်နာရီများ နှင့် ကိုက်ညီသော Apple Watch အထူးထုတ် Apple Watch ကို မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် မိမိကိုယ်ကို စွမ်းဆောင်နိုင်စေမည့် အတွေးအခေါ်များဖြင့် လူမည်းအတွေ့အကြုံကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဤမိတ်ဆက်ပွဲ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Apple သည် ၎င်း၏ Racial Equity and Justice Initiative မှတစ်ဆင့် အရောင်ရှိသော လူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတွင် ပါ၀င်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
လူမည်းသမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Apple ၏ လူမည်းဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မဟာမိတ်များက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop နှင့် လိုက်ဖက်သော Unity Lights နာရီသည် အာဖရိကတိုက်ရှိ လူမည်းအမေရိကန်များ၏ မျိုးဆက်များကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် ပိုမိုမျှတသောကမ္ဘာတစ်ခုလိုအပ်ခြင်းအတွက် အများသူငှာယုံကြည်ချက်တစ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Pan-African အလံ၏ တက်ကြွသော အနီရောင်နှင့် အစိမ်းရောင် အရောင်များသည် အနက်ရောင် တီးဝိုင်းပေါ်တွင် ဖြာကျနေသော မီးလုံးများအဖြစ် ပေါ်လာသည်။
Solo Loop Black Unity သိုင်းကြိုးသည် အံ့မခန်း... ခါးပတ်တစ်ခု afrofuturism မှလှုံ့ဆော်မှု ၎င်းသည် တရားမျှတသောကမ္ဘာတစ်ခုအတွက် လိုအပ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် (အမျှင်ပေါင်း 16000 ကျော်) ပါရှိပါသည်။ အနက်ရောင် အစိမ်းနှင့် အနီရောင် အစက်အပြောက်များ. Unity Lights စက်လုံးအသစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် ပြီးပြည့်စုံသည်။ စျေးနှုန်းက9ပါ။9 ယူရိုဖြစ်ပြီး Apple Store မှာ ရနေပါပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » Apple သည် လူမျိုးရေးသာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် Unity Lights Sphere အသစ်ကို လွှင့်တင်လိုက်သည်။
iOS 15.3 နှင့် watchOS 8.4 ကို ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Apple Watch အတွက် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များဖြင့် Lunar New Year နှင့် Black Month ကို ကျင်းပပါသည်။